Dhuxusha Birta, Nylon Zipper, Zipper Plastik, Slipers Zipper
Dhuxusha Birta, Nylon Qalabaha, Dhukunka Kumbiyuutarka, Beelaha Qalabka Leh ee iibka
MH Nadaafaduhu waxay inta badan kuugu xiraan adiga iyo annaga. Waxaanu la shaqeyneynaa dhamaan noocyada kala duwan ee loo yaqaan "zipper zipper", "ripper rein", "rip metal" iyo kumanaan kale oo kala duwan. Hantida sanadlaha ayaa ka badan $ 10 million. Magazine Zipper ayaa diyaar u ah macaamiisha 'tixraaca'. Waxaad sidoo kale booqan kartaa shabakadayada shabakadayada www.mh-zipper.com.
Iskuduwaha loogu talagalay Zipper
A: Habka caadiga ah loo isticmaalo ee loogu talagalay tayada Tayada Zipper
Bandhiga: Dheehka dhoobada waa inuu ahaadaa xitaa aan lahayn buluug iyo calaacal, Dhibaato gacanta, waxay dareemeysaa Soft. Kooxdu waxay u ekaataa sida mawjada jihada tooska ah iyo qadar ahaanba.
Ilkaha: Suunka ilkaha waa inuu noqdo mid sahlan. Marka la isticmaalo, waa lacag jilicsan oo aan lahayn buuq.
Tixraac: Noolku waa inuu si haboon oo xor ah u socdaalaa, xadhigaa, laakiin kama soo baxayo.
Hem: Dameerka ayaa ku habboon bandhiga iyada oo aan la jebin doonin. Kala soocida lakabka ee kala soocida cutubka iyo hagaha qaybta Muuqaalka: Cawska Bolt waa loo qaadan karaa si xor ah.
Joojinta ugu Sarreeya: Gawaarida sare waa inay la yimaaddaan iliga ugu horeeya ee jejebiyaha birta iyo wilon. Laakiin masaafadaasi ma dhaafi karto waana inay noqotaa mid adag oo muuqata.
Jooji joojinta: Joojinta hoose waa inay la timaadaa ilkaha ama lagu dhajiyo dusha sare waana inay noqotaa mid adag oo ay u muuqato ganaax.
B: Talooyinka lagu dooranayo Zipper
Kalluumeysiga kala duwan wuxuu ku habboon yahay xaalado kala duwan, markaa marka aad iibsanaysid qashinka arrimaha soo socda waa in lagu tilmaamaa soo saaraha:
1. Xagee loo isticmaali doonaa zipper (sida godka xididdada, kabaha, jackit, raincoat, teendhada, jeermiska u baahan dhar dhaqashada iyo maqaarka maqaarka leh qandho sare) ama shuruudo gaar ah oo khaas ah.
2. shuruudaha loogu talagalay maadada ama foojignaanta: uma baahnid inay ku jirto AZO ama nickel oo ka gudub qalabka xajinta.
C: Loo ogolaan karo dulqaad la'aanta
Sababtoo ah inertie ay sababtay xawaaraha qalabka mashiinka inta lagu jiro nadiifinta caarada sida fayadhowrka ilkaha, waxaa jiri doona dulqaad loo oggol yahay.
Waqtiga dheeriga ah ee jajabku waa kan weyn ee la oggol yahay.
Khaladaadka ay bixiso MH zipper Khaladaadka ay bixiso shirkadda japanese ee Fair Century Fair
size Qeexid (mm)
Spec Spec Base Tolerance
Nafaqada Dhererka (cm) Dulqaad la'aanta loo oggol yahay
Hoosta 30 ± 5mm
30-hoos XINGXXX ± 10mm
60-hoos XINGXXX ± 15mm
kor ku xusan100 ± 3%
(Aan kala go 'lahayn) Faafreebka furan
(Kala goyn karo) Dhamaan Laba Laba Furan
Faafreeb (kala tagsan) Laba Jid ah Dhamaystiran
Fare-saaraha Laba Jid ah Dhamaystiran
Hababka Cabbiraadda Dhukunka
A = Dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee cirbadda
A1 = cajalado madax ah
A2 = Qalabka dib u celi
Dhawaaqa dhammaystiran Laga soo bilaabo dhammaadka sare ee xawaaraha ilaa
caarada jooji hoose.
Faafreebka furan Laga soo bilaabo dhammaadka sare ee xawaaraha ilaa
caarada qaybta furan.
Laba jid furan oo furan Laga soo bilaabo dhammaadka sare ee xawaaraha ilaa
caarada dhamaadka hoose ee
Faafreeb leh Laba Xidho
(Oo loo qaabeeyey madaxa-xidhiidhka) Laga soo bilaabo dhammaadka sare ee xawaaraha ilaa
caarada caarada ah ee joogsiga hoose ee kale.
(Oo loo qaabeeyey hoos-u-
Xiriirka hoose) Laga soo bilaabo dhammaadka sare ee xawaaraha ilaa
Suufiyeyaasha caagga ah
Goobaha loo yaqaan "Resin Chippers"
Fare u jiid garee
Jiinyeerrada Home Categories - Caqabado - Zippers - Ribbon & Tape - Raashin - Meelo - Buttons - Macmiilka - Tassel & Fringe / Qalabaynta - Qalabaynta Qalabka - Gawaarida & Gargaarka - Mashiinka & Qeybaha - Faaruq - Qaar kale Nagu saabsan - MHM Overview - MH Industrial --- Fact Factories --- Farsamooyinka Ribbon & Bandhigyada --- Factory Factors - History History - Sheega Tilmaamaha --Image Galleries - Albaabada Albaabka Nala soo xiriir - Joogitaanka Goobta - Dib u noqoshada Community --Nagu soo biir